Malunga nathi - Ningbo Jinghe Rotomolding Technology Co., Ltd.
Ipontion yokujikeleza izinto
Ibhokisi yokuGcina izinto ezijikelezayo
Rotomolding iindawo Auto
Uthotho lokudlala lweRotomolding
Ukucocwa kweRotomolding kunye neMveliso yoGutyulo
Imveliso yegadi yokujikeleza
I-Ningbo Jinghe Rotomolding Technology Co, Ltd ngumenzi wobuchwephesha bokujikeleza kwemizi mveliso ngaphezulu kwe-15years.We senze phantse ii-600sets zokubumba kwaye senze iimveliso ezingama-200,000pcs kwimakethi yethu yaphesheya ngonyaka. Kunye experimente esisityebi kwaye wenze ngokubanzi uluhlu ngumngundo, sikholelwa ukuba inkampani yethu angafanela imfuno umahluko kuwe.
I-Ningbo Jinghe Rotomolding Technology Co, Ltd ibikwishishini lokujikeleza ngaphezulu kweminyaka eyi-15 ngaphezulu komngundo ojikelezayo ongaphezulu kwama-600 othengiswe kwihlabathi liphela ngonyaka. Ngokukodwa ukubonelela nge-aluminium yokuphosa iirotomolds, iAluminium CNC rotomolds.
Sinoomatshini bokujikeleza aba-9, oomatshini ababini be-CNC, oomatshini abasixhenxe abagwebu kumzi-mveliso wethu. Ngaphezulu, indawo yethu yokwenza umngundo ikufutshane nemveliso yeplastiki, oko kuthetha ukuba sinako ukusombulula iingxaki zokubumba ngexesha elifutshane. Ngale ndlela, umgangatho wokungunda kunye neempahla zeplastiki unokuqinisekiswa kakuhle.
Singumlingani opheleleyo, opheleleyo weenkonzo zomenzi, ukuba uneemfuno ezifanayo, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi.
Lwedilesi: Guangyuan indlela, indawo Guangyuan mveliso, xiepu idolophu, kwisithili zhenhai, ningbo, China